Qoyska Aduunka ugu tirada badan? + Sawiro – idalenews.com
Qoyska Aduunka ugu tirada badan? + Sawiro
Meeqa wiil ama gabdhood ayaa kula dhalatay? Haddii su’aashaa lagu weydiiyo, waxaa laga yaabaa inaad ku jawaabtid, 3, ama 4, amaba 5 aad gaarsiiso ama ilaa 12 qof.
22 Sano ka dib Caruurta Soomaaliyeed oo loo furey Meel ay ku cayaaraan